Nezvedu - Shanghai Huanna Viwanda & Trade Co., Ltd.
Shanghai Huanna Industry & Trade Co., Ltd yakatsaurirwa kuna Eco uye nemararamiro ane hutano. Mu2017 isu takatangisa nyowani-inoshamwaridzika mhando NATUREPOLY, mune tariro yekuita nyika ive nzvimbo iri nani kuzvizvarwa zvedu zvinotevera. Kurwisa kusvibiswa kwepurasitiki kwakakosha kupfuura nakare kose, uye NATUREPOLY anotenda kuti sarudzo diki dzinogona kuita mutsauko mukuru kuhutano hwedu nepasi redu. Wese munhu anoda kuita chikamu chake kubvisa mapurasitiki kubva pahupenyu hwezuva nezuva. Biodegradable uye inogadzirika zvinhu, sePLA (polyacid) uye nzimbe, zvinotibatsira kuti tisvike nhanho imwe padhuze nehupenyu husina mapurasitiki.
Kambani yedu inyanzvi yepamusorosoro ine brand NATUREPOLY, iyo inonyanya kutsvagisa, kugadzira uye kushandiswa kwezvizere zvinogadzirwa zvigadzirwa zvine hupfumi ruzivo rwemakore anopfuura gumi nematatu. Huanna ane 2 mafekitori ari muHuzhou neShenzhen. Zvese zvigadzirwa zvedu zvakagadzirwa nezvinhu zvinogadziriswa zvigadzirwa, izvo zvinoita kuti zvive 100% zvinokwenenzverwa, uye zvakapfuura EN13432, ASTM D6400, Australia As5810, EU uye nezvimwe zvepasi rese zvemagetsi ekuongorora zvitupa. Nechirevo che "Nharaunda irinani, hupenyu huri nani", tinoramba tichipa zvigadzirwa zvine zana zvinogadziriswa, uye nemararamiro ane hutano zvakare.
Zvikamu Shanghai Huanna Industry & Trade Co., Ltd.
Mutengesi wezvigadziriswa zvinogadziriswa zvemakore gumi nematatu
Uswa hunogadzirwa nemafuta
Biodegradable Raw Zvinyorwa
ZVAKANAKA ZVEDU ZVIKURU
1.Over makore gumi nematatu ekugadzira ruzivo
Kambani yedu yanga ichigadzira uye ichiburitsa zvigadzirwa zvinogadziriswa zvinopfuura makore gumi nematatu. Isu tinonyanya kutumira biodegradable, inogadziriswa uye inogadziriswazve tafura, inogadziriswa packagings. Yedu R & D inogona kuburitsa anopfuura gumi zvinhu zvitsva gore rega uye 80% yezvigadzirwa zvedu ndeyekutengesa kunze.
Yakasimudzirwa nemasangano epasi rese ane masimba ekuyedza
ZveNATUREPOLY, kutsvaga kwemhando yepamusoro kwagara kuri kwekutanga kukoshesa. Zvigadzirwa zvedu zvakapihwa zvitupa zvemunyika dzese seEU EN13432, ASTM D6400, Australia AS5810, zvinoratidza kuti NATUREPOLY ndeye 100% inogona kuora uye inogadzirwa.
3.Professional vatengi uye nekukurumidza kutumira
Tiine zvigadziko zviviri zvekugadzira muChina, tinogona kukurumidza kupindura kune zvinodiwa nevatengi. Vatengesi vedu vane hunyanzvi uye vane shungu dzekupindura mibvunzo yako yese. Isu tinopa inoteerera uye yakachengeteka kuendesa yevatengi mirairo kune chero nzvimbo inodiwa navo pasirese.